धरानमा खोप कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने तयारी::Hamro Koshi Awaj / awaz
वडाबाट सङ्कलन गरेर ल्याएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर खोप लगाइने
धरानः धरान उपमहानगरपालिकाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
अव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भएको गुनासो चौतर्फीरुपमा आएका कारण आगामी दिनदेखि उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित ढङ्गबाट खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । मेयर तिलक राईको कार्यकक्षमा बिहीबार मेयर राईको अध्यक्षमा समीक्षात्मक बैठक बसेको थियो । सो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारबाट कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ । धरानमा चाइनिज भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने अभियान बुधबार सम्पन्न भएको छ । धरानमा ११ हजार बढी नागरिकहरुले उक्त खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडाका अनुसार यो भन्दा अगाडी खोप केन्द्रहरुमा स्वास्थ्य महाशाखाले मात्र समन्वय गरेर खोपहरु लगाइएको थियो । खोप केन्द्रहरुमा स्वयंसेवकहरु पनि परिचालन गरिएको थियो । त्यसले गर्दा भनेजति व्यवस्थित हुन नसकेका कारण अबदेखि स्वास्थ्य महाशाखाले खोप लगाउने तर्फको व्यवस्थापन गर्ने अधिकृत खतिवडाले बताए ।
‘खोप केन्द्रमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, कति कर्मचारीहरु आवश्यक पर्छन् ?, अनुमगनको व्यवस्थापन गर्ने र समन्वयको व्यवस्थापन गर्ने कामहरु प्रशासनिक भएकाले प्रशासनले गर्ने निर्णय भए अनुरुप हामि त्यो तयारीमा जुटिरहेका छौं,’ उनले भने ।
धरान उपमहानगरपालिकाले यो भन्दा अगाडि पनि धेरै पटक खोपहरु लगाइसकेको बताउँदै अधिकृत खतिवडाले भने, ‘त्यसमाचाहिँ व्यवस्थित भएन, लक्षित वर्गहरुले पाएनन्, जो लक्षित वर्ग हो, उनीहरु छुटे, अरुले लगाए, अव्यवस्थित भयो भनेर गुनासो आयो र समाचारहरु पनि आयो, सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचनात्मक टिकाटिप्पणीहरु आयो । जसले गर्दा उपमहानगरपालिकाले आगामी दिनमा चाहिँ जति पनि खोपहरु लगाइन्छ । त्यो खोपलाई अलिक बढी व्यवस्थित बनाएर जाने तयारी गरेको छ ।’
धरानमा अब हप्तादिनभित्रमा अर्को समूहलाई लक्षित गरेर अमेरिकन जोनसन एण्ड जोनसन खोप आउँदैछ । सो खोप लगाउन अहिले तोकिएकै सात वटा खोप केन्द्रहरुमा उपमहानगरपालिकाले नै आवश्यक कर्मचारी छनौट गरेर राख्ने भएको छ । अधिकृत खतिवडाले भने, ‘खोप लगाउन अहिले तोकिएकै सातवटै खोप केन्द्रहरुमा कति कर्मचारीहरु आवश्यक पर्छ ? यसको लागि उपमहानगरपालिकाको प्रशासन शाखाले पूर्व तयारी गरिरहेको छ । खोप केन्द्रमा कस्ले लेख्ने ? कस्को जिम्मेवारी के हो ? भनेर अगाडी नै हामी तोक्दैछौं ।’
अब ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहलाई लक्षित गरेर खोप लगाइने भएकोले यो समूहका मानिसहरुको तथ्यांक प्रत्येक वडाहरुमा संकलन गरिने तयारी भइरहेको छ । २० वटै वडाबाट संकलन गरेर ल्याएको तथ्याङ्कको आधारमा खोप लगाइने भएको छ । आउँदो खोपलाई उपमहानगरपालिकाले अझ बढी व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरेर खोप लगाइने बताएको छ । बिहीबारदेखि लगाइने भनिएको जोनसन एण्ड जोनसन खोप जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा आइनपुगेको कारण स्थगित भएको थियो ।
धरानमा परिवर्तनका लागि सामाजिक अभियानद्वारा मुटुरोगको परीक्षण
धरानमा सिपी गजुरेलको गर्जन
लगातार स्क्रिन हेर्दा बालबालिकामा कस्तो असर पर्छ ?